Ikhekhe iyi nomhlobiso bendabuko kanye ngemfanelo yanoma yimuphi umkhaya, imikhosi corporate noma zezingane. Usuku lokuzalwa oluhle, umshado noma nje ephathini itiye ekhaya ayiphelele ngaphandle le dessert omkhulu amnandi. Akubuzwa ukuthi izinhlobo amakhekhe kukhona ezihlukahlukene omkhulu - uju ikhekhe, amabhisikidi, esilucwecwana amakhekhe, ushizi amakhekhe, Ikhekhe "ubisi Lenyoni", amakhekhe, meringues, nabanye abaningi. Umklamo ngezinye izikhathi zokuqala ngakho futhi ekhangayo nje bakaJesu zange akholwe bonyana ngaphambi ikhekhe yangempela.
Noma yimuphi wekhaya ukulungiselela ikhekhe ekhaya, ezama ukuhlobisa it ukuze kubukeka hhayi kuphela mnandi futhi esiphundu, kodwa futhi enhle. Ikhekhe "Raffaello" (ikhekhe "Raffaello"), owaziwa ngokuthi "Pincher", "Pancho" has a emangalisayo amnandi ubisi ukunambitheka nokusikisela kakhukhunathi vanilla, futhi umoya ngaphandle okusikhumbuza ifu elimhlophe. Ukuvela etafuleni, le dessert nje eziningi imizwelo, futhi konke kuba ezithakazelisayo kanye ilungiselela lokhu dish. Recipe "Ikhekhe Raffaello" idume ukukhanya ibhotela ukhilimu, lonke alimondi nuts nobumnene kakhukhunathi, futhi ukunambitheka kakhulu efana candy adumile "Rafaello". Noma yimuphi wekhaya angapheka lokhu velikoloepny yokusaswidi ngaphandle kokuba amakhono akhethekile. Indlela ukupheka "Raffaello" ekhaya? Ufuna uthando ukupheka nokulangazelela okukhulu Ngamangala futhi sijabulise izivakashi. Recipe "Ikhekhe Raffaello" akuyona eziyinkimbinkimbi, akuthathi isikhathi esiningi, kodwa umphumela ziyoyidlula wonke amathemba. Ngakho-ke obyahatelno kuwufanele ngizame ukulungisa le dessert esihlwabusayo.
Ukuze silungiselele lokhu ikhekhe uzodinga amasethi ambalwa imikhiqizo.
Amaqebelengwane amagilebhisi: amaqanda amabili inkukhu, 200 amagremu ushukela, vanilla ushukela (engeza ukunambitha, abanye abantu abafana elikhanyayo vanilla ukunambitheka, omunye ukukhanya mncane vanilla ukunambitheka) 200 ml ukhilimu ekubhaxabulweni, amabili izinkomishi kafulawa omhlophe, esikhwameni se-baking powder.
Ukuze ibhotela ukhilimu: ukhilimu inkomishi (hhayi ngaphansi kuka-20% amafutha), ingilazi ukhilimu esindayo (hhayi ngaphansi kuka-30% amafutha), 150 amagremu ushukela granulated noma ushukela oluyimpuphu, vanilla ushukela.
Ukuze ukugcwaliswa: 200 of fresh noma eqandisiwe amajikijolo (strawberry noma ama-raspberry, okuyinto efana kakhulu), 6-8 candy esitolo "Raffaello".
Ukuze ahlobise: 10 "Raffaello" amaswidi, okumele abe ihlukaniswe neengcezu, ukupakisha kakhukhunathi (hhayi zaveza).
Okokuqala, udinga ubhake amaqebelengwane. Ukuze wenze lokhu, kudingeka yenza i iziqongo emaweni amaqanda, ushukela kanye vanilla. Bese wengeza ukhilimu esindayo futhi uqhubeke eshaya olwengeziwe. Kancane kancane engeza ezimbili izinkomishi kafulawa izingxenye ukugwema clumping, kanye baking powder, ngokuletha mass ubebushelezi. Kokuqendwa inhlama wasakazeka isikhunta, pre-ugcobe ibhotela noma ulenza libe iphepha bayobhaka. Kuhhavini is sishisiswe 170 degrees ubhake ikhekhe for isigamu sehora, hlola ukulungela uthi lokuvungula. Umbala ikhekhe kufanele kube egolide, futhi uma usulungile, kumele kube cool ngokuphelele futhi ngobunono uthathe ikhekhe ezimbili zilingana.
Ukhilimu iphekwe kakhulu ukumane: ukhilimu omuncu noshukela (ushukela oluyimpuphu), ukhilimu okunamafutha vanilla ngesiswebhu e elihle ivolumu isisindo bese efakwa efrijini ukuze kuphole kancane.
Ungakwazi baqale bahlanganise ikhekhe. Kodwa kungakenzeki lokho, kufanele ahlanze amajikijolo uphinde ubavumele ukuze ome (noma eneqhwa amajikijolo kusukela efrijini), ukulungiselela amaswidi "Raffaello" - 6-8 izingcezu inyama egayiwe kanye izicucu 10 zezikhali halves. Mark owokuqala ikhekhe ngesandla esivulekile isetshenziswa ke ungqimba ukhilimu selehlile ku esiqandisini-1 cm. Phezulu ukhilimu ubeke amajikijolo, kancane cindezela wabayisa ukhilimu. Amajikijolo phezulu ukuze ungeze ukhilimu kancane xaxa. Fafaza candy ochotshoziwe ungene ukhilimu bente Korzh yesibili. Ukhilimu esisele sisetshenziswa ngokulinganayo ukuze engxenyeni engenhla kanye izinhlangothi ikhekhe. Thatha kwesigamu ushokoledi ngokulinganayo kumbuthano ukuhlobisa ikhekhe, ufafaze zikakhukhunathi.
Recipe "Ikhekhe Rafaello" Yiqiniso, kungaba ushintsho oluncane, izame test ukhilimu. Uqedile, isibonelo, bhisikidi amakhekhe , futhi Ukhastadi. Kodwa noma kunjalo, ukunambitheka ikhekhe lihle - ubisi vanilla ne lukakhukhunathi ndawana umbala ezimhlophe, yena Uzokhanga kubo bonke, ngaphandle kokukhetha! Bon appétit!
Biography Alia Ustinenko, kubahlanganyeli project TV "Dom-2"
Indlu Guest "Olga", Gelendzhik: incazelo kanye nokubuyekeza
YasePompeii: Indaba kokufa edolobheni ngezithombe. Umlando ekumbeni yasePompeii. YasePompeii: Alternative Umlando